नेपाल आज | ओली र प्रचण्ड नै राजसंस्था व्युँताउन सक्रिय (भिडियोसहित)
ओली र प्रचण्ड नै राजसंस्था व्युँताउन सक्रिय (भिडियोसहित)
आइतबार, ०५ असोज २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज
सरकारमै सहभागी समाजवादी पार्टीले राजसंस्था फर्काउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै उद्धत भएको आरोप लगाएको छ । सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम प्रचार विभाग सदस्य रामप्रसाद रिजालले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डका गतिविधिले गणतन्त्रलाई कमजोर बनाइ राजसंस्था फर्काउने वातावरण बनाइरहेको जिकीर गरे ।
नेपाल आजसंगको विशेष साक्षात्कारमा आएका रिजालले भने, ‘ ओली र प्रचण्ड किन संविधान संशोधन गर्न मान्दैनन् ? संशोधन गर्छु भनेर सहमति गर्ने तर सहमतिको पालना नगर्नुको कारण के हो ? मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । जनजिविका सवालमा सरकार पूरै उदासिन छ । यो भनेको सिधै व्यवस्थालाई नै अलोकप्रिय बनाउने काम हो । यसले गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन । ओली र प्रचण्डका काम राजसंस्थालाई फर्काउने काममा सहयोगी भए । ’
रिजाल भन्छन्, ‘संविधानका ८० वटा धारा बिभेदकारी छन् । तीनलाई सच्याउन जरुरी छ । संविधानमा खस आर्य समुदायको परिभाषा गरिएको छ तर अन्य जातीका बारेमा केही बोलिएको छैन । अहिलेको ७ प्रदेशले हुँदैन । मधेशमा २ र पहाडमा ८ सहित ११ प्रदेश हुनुपर्छ । धर्म निरपेक्षता ठीक छ, तर परिभाषा मिलेन । यो परिभाषा फेर्नुपर्छ । ’
अहिलेको सरकार संविधान संशोधन गर्न तयार नभएकाले अब समाजवादी पार्टी सरकारबाट फिर्ता हुने र सिधै सडकमा जाने तयारीमा छ । दशैं, तिहार र छठ पर्व मनाएपछि समाजवादी सरकारबाट हटेर सडकमा जाने छ ।
समाजवादी पार्टी आफनो विचार र नीति मिल्ने दलहरुसंग एकताका तयार भएपनि राजपासंग तत्काल एकताको सम्भावना छैन । राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादव र अनिल झा एकताको विपक्षमा भएकाले एकता टरेको हो । शरत्सिंह भण्डारी, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र यादव एकताको पक्षमा भएपनि महन्थ ठाकुर तटस्थ रहेका छन् । राजकिशोरले उपेन्द्रलाई नेता मान्न नसक्ने पुरानो रिसिविका कारण समस्या बल्झेको रिजालको तर्क छ ।
तर, अन्तिम समयमा महतो, भण्डारी र यादवले पार्टी फुटाएर भएपनि समाजवादी पार्टीसंग एकता गर्ने उनको विश्वास छ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र ११ प्रदेशको अवधारणा राजपाले स्वीकार्नु पर्नेछ ।
केन्द्रीय सदस्य रिजालले राजपाबाट निर्वाचित रेशम चौधरीलार्ई जेल हाल्नु घोर अन्याय भएकाले उनका लागि पार्टीले कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिए । उनी भन्छन्, ‘ रेशमलाई जेल हाल्ने हो भने यो देशमा प्रचण्ड, बाबुराम र उपेन्द्रलाई पनि हाल्नुपर्छ । रेशम चौधरीले आन्दोलन गरेका हुन् । त्यसक्रममा केही क्षति भयो । प्रचण्ड, बाबुराम र उपेन्द्रले पनि आन्दोलन गरेका थिए । त्यहाँ पनि मान्छे मरेका थिए । चौधरीले जेल जानुपर्ने अरु चाहिं जान नपर्ने ? ’
नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिदै, अभियानद्वारा २६/११ सम्झदै विभिन्न कार्यक्रम
आतंकवादबिरुद्ध जनकपुरधाममा मोटरसाइकल -याली प्रदर्शन